साउन १ देखि बढ्यो सरकारी कर्मचारीको तलब, कसको कति पुग्यो ? – Ktm Dainik
साउन १ देखि बढ्यो सरकारी कर्मचारीको तलब, कसको कति पुग्यो ? - जे देख्छ, त्यही लेख्छ
केपी शर्मा ओली सरकारले बढाएको तलव शेर बहादुर देउवा सरकारले निरन्तरता दिने भएको छ ।
सरकारले सरकारी कर्मचारीको नयाँ तलबमान साउनदेखि नै लागू गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सुनाउँदै सरकार प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताएका हुन् ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, स्वास्थ्य सेवा, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक र प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारीका लागि साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी नयाँ तलबमान कायम गर्ने निर्णय गरेको छ ।
साउन १ गतेदेखि मासिक २ हजार रुपैयाँले सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि भएको छ । यसअघिको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७८ साउन १ गतेदेखि सरकारी कर्मचारीको तलब २ हजार वृद्धि गर्ने बजेटमा प्रस्तुत गरेको थियो । नयाँ सरकारले पनि पुरानै बजेटलाई मान्यता दिएकोकाले सरकारी कर्मचारीको तलब बढेको हो ।
निवर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट भाषणमा २०७८ साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी सरकारी कर्मचारीको तलब मासिक २ हजार रुपैयाँले वृद्धि गरेको बताएका थिए ।
प्रतिनिधिसभा नभएको बहानामा अघिल्लो सरकारले जेठ १५ मा अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशबाट बजेट ल्याएका हुन् ।
कसको कति तलब वृद्धि ?
साउन १ गतेदेखि मुख्यसचिवको तलब ६७ हजार १४० पुगेको छ । यसअगाडि मुख्यसचिवको तलब ६५ हजार १४० तोकिएको थियो ।
सचिवको तलब ६० हजार ६८० बाट बढेर ६२ हजार ६८० पुगेको छ । त्यस्तै, सहसचिवको ४७ हजार ३८० बाट बढेर ४९ हजार ३८०, उपसचिवको ४० हजार ३८० बाट बढेर ४२ हजार ३८०, शाखा अधिकृतको ३५ हजार ९९० बाट बढेर ३७ हजार ९९०, नायब सुब्बा (अतिरिक्त तलबमान) को ३० हजार ८२० बाट बढेर ३२ हजार ८२० पुगेको छ ।
यसै गरी नायब सुब्बाको २८ हजार २०० बाट बढेर ३० हजार २००, खरिदार (अतिरिक्त तलबमान) २७ हजार ५७० बाट बढेर २९ हजार ५७० र खरिदारको २६ बाट ६१० बढेर २८ हजार ६१० पुगेको छ ।
यसै गरी कर्मचारीहरूलाई वर्ष दिनमा घुमघामका लागि बिदा दिने पनि सरकारले बजेटमा भनेको छ । अब बर्सेनि कर्मचारीले १० दिन भ्रमण बिदा पाउनेछन् ।
तलब वृद्धि गरेको सरकारले कर्मचारीको १ लाखको स्वास्थ्य बीमाको पनि व्यवस्था गरेको छ ।
नोट : श्रावण २ गते प्रकाशित भएको यस समाचारलाई श्रावण २५ गते शेर बहादुर सरकारले पुरानो सरकारले बढाएको तलबलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेसँगै अध्यावधिक गरिएको हो । सम्पादक
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको: सोमबार, साउन २५ २०७८ २०:१९:२९
लोकसेवाले माग्यो ३०० स्टाफ नर्सका लागि दरखास्त
नेपाल प्रहरीले माग्यो १ लाख म्यादी प्रहरी, सबै सुविधासहित ४३ हजार ४४० पाउने
सशस्त्र प्रहरीमा जागिर खान उत्तरपुस्तिकामा चिट नै स्टिच, हर्कत गर्ने पाँच परीक्षार्थीलाई लोकसेवाले लगायो एक वर्षे प्रतिबन्ध